“100 Million Views ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့ MV အများဆုံး ကိုရီးယား အနုပညာရှင်” စံချိန်ကို ထပ်မံ တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ BTS | News Bar Myanmar
“100 Million Views ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့ MV အများဆုံး ကိုရီးယား အနုပညာရှင်” စံချိန်ကို ထပ်မံ တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ BTS
BTS ကတော့ Youtube မှာ 100 million views ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့ MV အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်ပါ။ ခုဆိုရင်တော့ BTS ရဲ့ “Dynamite – Choreography version” ဟာ ကြည်ရှုသူ သန်း ၁၀၀ ကျော်သွားခဲ့ပီး အဖွဲ့ရဲ့ 100 million views ကျော်တဲ့ ၃၁ ပုဒ်မြောက် MV ဖြစ်လာခဲ့ပါပီ။
“Dynamite – Choreography version” video ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိခဲ့တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ထွက်ရှိပီး ၄ လ နဲ့ ၄ ရက်အကြာမှာ ဒီစံချိန်ကို ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “Dynamite” Original MV ကတော့ 800 millions views အမြန်ဆုံး ရရှိခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင် အဖွဲ့ MV အဖြစ် စံချိန်တင်ထားပါတယ်။
“Dynamite- Choreography version” ကတော့ “Lights,” “Dope,” “Fire,” “Blood Sweat & Tears,” “Boy in Luv,” “Save Me,” “Not Today,” “Spring Day,” “DNA,” “Danger,” “I Need U,” “War of Hormone,” “MIC Drop (Steve Aoki Remix),” “Fake Love,” “IDOL,” “Just One Day,” “We Are Bulletproof Pt. 2,”
“Run,” “Boy With Luv,” “No More Dream,” “Airplane Pt.2(Japanese version),” “ON” (Kinetic Manifesto Film : Come Prima), “ON,” “IDOL (feat. Nicki Minaj),” “Black Swan,” “Stay Gold,” “Dynamite,” “Life Goes On,” “Dynamite” b-side version, နဲ့ “Make It Right.” တို့ပြီးနောက် 100 million views ကျော်ခဲ့တဲ့ Video ဖြစ်လာတာပါ။
Photo: BTS- Dynamite
Next ၂၀၂၁ January လအတွင်း ကမ္ဘာအနှံ့နာမည်အကြီးဆုံး ထိုင်းမင်းသား (၁၀) ဦး »
Previous « အကြိမ် (၃၀) မြောက် Seoul Music Awards မှာ ဆုရရှိခဲ့ကြသူများ (အပြည့်အစုံ)